Telo ny tranga vaovao, tafakatra 46 tratran’ny coronavirus : hotiliana an-kalamanjana ireo mpandeha avy any ivelany | NewsMada
Par Taratra sur 31/03/2020
Misoko mangina. Nahitana tranga vaovao miisa telo indray ireo tratran’ny coronavirus, araka ny nambaran’ny filoham-pirenena, omaly raha tsy nisy izany ny atoandro. Nanapa-kevitra ny fanjakana fa hisy ny fepetra horaisina, manomboka izao.
Tranga telo vao vao indray no nivoaka tamin’ny fitiliana, araka ny nambaran’ny filoha. Roa avy any Toamasina ary vehivavy 61 taona iray avy any Fianarantsoa ireo tratran’ny coronovirus ireo. « Hatao fitiliana an-kalamanjana ireo rehetra tonga avy any ivelany. 5 000 izy ireo ka 40 mahery ireo mitondra ny coronavirus », hoy ny filoha. Hanomboka anio izany ka anisan’ny hotiliana ireo tonga ny 11 sy 12 marsa izao eny amin’ny Jumbo Ankorondrano, hanomboka ny tolakandro. Hatao eny amin’ny CCI Ivato kosa ireo tonga tamin’ny sidina ny13 sy 14 ary 15 marsa. Hotanterahina ny 1 avrily eny amin’ny CCI Ivato koa ho an’ireo tonga tamin’ny sidina ny16 sy ny 17 marsa. « Tapitra anio 31 marsa ny 15 andro ho azy ireo ka hatao fitiliana avokoa afahana mamantatra na salama na mitondra ny covid-19 », hoy ihany ny filoha.
Fepetra vaovao hampadio ny saintsika
Hatao eny Ankorondrano ny 1 avrily ny fitiliana ho an’ireo tonga 18 marsa ary ho an’ireo tonga ny 19 marsa kosa, hatao eny amin’ny CCI Ivato ny 2 avrily. « Fepetra vaovao, mba hampadio ny saintsika sy mahazo antoka ireo avy any ivelany izany mba ho voafehy ny tsy fiparitahan’ny valarentina », hoy ny filoha.
Nanterin’ny filoha fa hampitomboina ny fitiliana ka anisan’izany ny hanofanana ny « biologiste ». Eo koa ny hanokafana ireo laboratoara miisa telo, ahitana ny enyAnkatso sy ny HJRA ary koa ny eny Androhibe. Tahaka izany ny any amin’ny faritra. « Hanaovana fitiliana isanandro izany… », hoy ihany izy.
Billet: Coronavirus et sécrétion d’autres virus 29/05/2020
Chronique: soudés à distance 29/05/2020
Ambovombe: un scandale dans l’air 29/05/2020
Barrière sanitaire – RN2: 38 véhicules refoulés et 7 autres mis en fourrière 29/05/2020
Les photos du 29 Mai 2020 29/05/2020